Dood ka taagan xoriyadda qoowlka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Farshaxan Lars Vilks. Sawirqaade: Bertil Ericson/SCANPIX
Dood ka taagan xoriyadda qoowlka
La daabacay onsdag 19 maj 2010 kl 13.00
Ku dhowaad 2 000 oo ruux ayaa saxiixooda ku duugay liiska aaladda internetka, oo ay bilaabeen koox arday dhigata jaamicadda Uppsala, iyadoona lagu taageerayo farshaxanlaha Lars Vilks, inuu dhameeystiro muxaadarro toddobaad hortiis ay uu suurtageli weeyday inuu ka jeediya jaamicadda Uppsala ugu wacnayd qalalaase loogala hor yimid.
Muxaadarada uu bixinayay Lars Vilks ayuu ku soo bandhigay sawirro matalaya niman khaniisiin ah ee cimaamad madaxa u saaran tahay oo matalayay Nabi Maxamed, waana midda ka careeysiisey qaar ka mid ahaa dhageeystayaashii muxaadarada. Iyadoona halkaa lagu joojiyay rabshado awgood.
Dadyoowga qaba in farashaxanka dib loo soo casumo si uu muxaadaradiisii u dhameeystirto waxaa ka mid ah ardayga la yiraahdo Joel Bergroth:
- Waa mid laga xumaado haddii jaamicaddu u hogaansato qaar aan badnayn ee ka mid ah kuwa dadka qab qabsada. Waa hab lagu burburin karo wax walba ee demoqoraadiyadda ka mid ah, sida uu sheegay
Joel Bergroth, mar uu wareeysi siiyay idaacadda wararka ee Rapport.
Sidoo kale waxaa ka mid ah dadyoowga difaacay in farsahaxan Lars Vilks dib loogu ogolaado inuu muxaadaradii laga dhabaqay 11-kii bishan maajo dib loogu casumo waxaa ka mid ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Ulrika Knutsson:
- Midda ka dhacday jaamicadda Uppsala waxay ahayd cashar uu bixinayay farashaxan Lars Vilks oo ey qaar buuq wadaa joojiyeen, poliiskuna dhibaatooyinkii soo kala dhex galay oo joojiyay. In muxaadarada la joojiyo waxay ahayd fadeexad. Midda aan dalabanayno waxay tahay inuu dib u soo noqodo oo dhameeystirto muxaadaradiisii.
Ulriks Knutsson waxay ka mid tahay dadyoowgii dhaleecooyinka waaweeyn beryahan dambe dusha looga tuurayay maadaamoo aanay u istaagin difaaca xuquuqda farshaxanka iyo xaqa uu u leeyahay xoriyadda qowlka.
Dadyoowga dhaleeceeynta u soo jeediyay Ulrika, waxaa ka mid ah Johan Lundberg, ahna soo saaraha wargeeyska liberaaliga ee Axess:
- Hormoodayaasha bulshadu uma aanay istaagin siday ku difaaci lahaayeen Lars Vilks, iyo xuquuqda uu u leeyahay inuu farshaxanku soo bandhigo ama uga doodo sida uu u fahmayo ama ay la tahay.
Fikir middaa la mid ah waxaa qaba madaxa waaxda siyaasadda ee wargeeyska Sydsvenska Heidi Avellan:
- Waxa oo dhami waxay u ekaanayaan wax walax u dhigma. Waxaa la leeyahay haddii uu ruux meel kaga dhacayo waa inuu faraha ka qaadaa. Waxaa la leeyahay matalidii nabi Maxamed uu ku matalay farshanku ey, ay ahayd daandaansi, sidaa daraadeed aan lagu difaaci karin, waana middaa aan u baahannahay in la difaaco.
Haddii kale waxaa imanaysa in aannu isku sameeyno faaf-reeb (censur) iyo in la xaddido farshaxanka iyo saxaafadda. Xaqul qoowlka Lars Filks waa in cid walba ee aaminsan xuquuqda hadalka ay difaacaan.